Sidee maanta loo dhisi lahaa wakaaladda SEO? Qaybta 1: Macaamiisha iyo isbeddellada | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Sidee maanta loo dhisi lahaa wakaaladda SEO? Qaybta 1: Macaamiisha iyo isbeddellada
Sidee maanta loo dhisi lahaa wakaaladda SEO? Qaybta 1: Macaamiisha iyo isbeddellada
0 Daqiiqado 9 ayaa akhriyay
Faafida ayaa wax walba hakisay. Kadib, waxay ku qasabtay dadka iyo ganacsatada si isku mid ah maskaxda bilowga ah. Fikirka Zen wuxuu tilmaamayaa is-khilaaf u muuqda: sida aad wax badan iyo wax badan uga ogtahay mawduuca, waxaad u egtahay inaad meesha ka saarto fursadaha kale.
Waxa soo raaca raadinta qaabaynta doorashooyinka mustaqbalka dhow oo ah qayb ka kooban saddex qaybood oo iftiiminaysa su'aasha udub-dhexaadka ah - Sideed u dhisi lahayd hay'ad SEO ah 2020?
Waxaan sahamin doonaa kakanaanta mawduuca, sameynta meelaha taabashada muhiimka ah ee abuura muuqaalka wakaalada, laga soo bilaabo qiimeynta isbeddelada hadda jira ee hab-dhaqanka macaamiisha, ilaa sida ay isu beddeleen la-hawlgalayaasha muhiimka ah ee wakaaladda SEO:
Isbeddellada macaamilka iyo ganacsiga ee soo baxaya oo beddelaya habka dadku u falgalaan. (Qaybta koowaad)
Qaabka ganacsiga ee wakaalada SEO ee hadda iyo falanqayntiisa qoto dheer. (Qaybta labaad)
Suurtagalnimada in laga fikiro waxa u eg hay'adda SEO ee 2020 iyo wixii ka dambeeyaba. (Qaybta saddexaad)
Waxaan u qaabeynay taxanahan sidii layli ganacsi oo loogu talagalay hogaamiyayaasha wakaalada SEO iyo halganka ay hadda ku jiraan sababtoo ah waxaa naga go'an inaan taageerno wakaaladaha inay riixaan hubanti la'aanta.
Waxaad isticmaali kartaa barashada, agabka, iyo fikradaha soo socda, adiga iyo kooxdaada, oo aad u wanaajisaa istiraatijiyaddaada macnaha dhabta ah. Laga soo bilaabo Gartner's Hype Cycle iyo Business Model Canvas, qaybta isdhexgalka oo kuu ogolaanaysa inaad dhisto nooc cusub oo wakaalad SEO ah oo ka soo jeeda salka hoose, waxaad mari doontaa qaabab kala duwan, qaar aad uga yaqaan kuwa kale.
Sida macaamiishu u eegaan macnaha guud
Laga soo bilaabo Maarso 2020, waxaan sii wadnay inaan aragno isbeddelada dhaqanka macaamilka, dhaqamada internetka ee cusub, iyo aragti caalami ah oo wali quseysa. Iyada oo ay jiraan arrimo walaac ah oo ku saabsan caafimaadka iyo dhaqaalaha oo sii hurinaya hubanti la'aanta iyo heerka shaqo la'aanta sare ee adduunka oo dhan, waxaan u baahanahay inaan si dhow ula socono habka dadku wax u iibsanayaan, u nool yihiin iyo wax u cunaan hadda.
Raadinta baahida iyo fiirinta isbeddellada raadinta sannadba sanadka ka dambeeya, xogta Google Ads-ka ay tahay isha, ayaa weli ah hab sax ah oo lagu fahmo waxa wanaag u beddelay, iyo waxa kaliya ee isbeddel degdeg ah ku xiran tahay saameynta faafa ee muddada-gaaban.
Ka dib oo dhan, haddii aan meel dhigno lenska cilmu-nafsiga macaamiisha, waa inaynaan iloobin in dadku ay aad ugu nugul yihiin inay qiimeeyaan badeecadaha iyo adeegyada muhiimka ah iyo kuwa aan muhiimka ahayn ee isticmaalka maalinlaha ah hadda, oo muujinaya khatarta khatarta ah ee caadiga ah.
Walwalku wuxuu keenaa baahida, maadaama arrimaha maaliyadeed ay aad uga fog yihiin in la xalliyo. Fiiri raadinta ugu sareysa ee Mareykanka laga bilaabo Luulyo 2020:
Ka dib mawduucan, pragmatism waa xoogga wadista, maadaama macaamiil badan aysan ku soo laaban doonin "caadi" waqti dhow - Daraasad ay sameeyeen Kooxda Cambridge xitaa qadaadiic muuqaallo cusub kuwaas oo udub-dhexaadkoodu ku saleysan yahay jawaabta degdegga ah ee COVID-19 sida Millenniyada argagaxa leh (oo diiradda saaraya dhaqaalaha qoyska) ama Pragmatists (oo diiradda saaraya dhimista kharashaadka aan muhiimka ahayn).
Hase yeeshe, fiirinta xogta raadinta waxay muujineysaa fikradaha u dhexeeya: Alaabooyin dheeraad ah oo ku-talogal ah ama aan daruuri ahayn ayaa bilaabay inay soo noqdaan qaybaha sida dharka "ciyaaraha" ama madadaalada guriga, in kasta oo warshaduhu ay weli saameynayaan.
Xitaa Sida ay dadku u eegaan madadaalada ayaa isbeddelaysa, doorashada inaad ku qaadato wakhtiga firaaqada meel u dhow guriga ama si ammaan ah:
Dhanka kale, sababtoo ah dadka qaar ayaa wali shaqeeya ama wakhtigooda inta badan ku qaata guryahooda, si wadajir ah qoys iyo saaxiibo dhow, Qaybta hagaajinta guriga ayaa sii socota inay koraan:
Iyadoo miisaaniyada safarka iyo safarka la hakiyay inta badan shaqaalaha macluumaadka, shaqada fog waxay u muuqataa inay halkan joogto si ay u sii jirto. Waa waxa baahida joogtada ah loo qabo dhismaha xafiiska guriga waxay u jeedaan, si kastaba:
Iyo baahida sii kordheysa ee kirada baabuurta iyo badqabka, dhaqdhaqaaqa gaarka ah guud ahaan:
Ujeedada macaamiishu waxay muujinaysaa dardargelinta beddelka dookhyada kanaalka iyada oo diiradda la saarayo hawlgallada khadka tooska ah, in kasta oo daraasaadka makrodu ay muujinayaan heerarka walaaca ee la xidhiidha leben iyo hoobiye oo yara fududeynaya. Tusaale ahaan, Gobolka Deloitte ee Tracker-ka Macmiilka wuxuu xaqiijinayaa kororka u janjeera heerarka aaminaadda si looga dukaameysto dukaamada (49%), aado maqaayadaha (32%) ama joog hoteel (34%) heer caalami. Dabcan, tirooyinka ayaa weli hooseeya.
Taasi waa sababta dariiqa ugu wanaagsani waa in lagula tartamo daraasaadka heerka-weyn xogta raadinta - waa halka fikradaha la xidhiidha ay degan yihiin, kaa caawinaya inaad kala garato isbeddellada waara, dardargelinta wakhtiga, iyo isbeddellada muhiimka ah ee danaha macaamiisha kuwaas oo saameeya hawlaha ganacsiga sidoo kale.
Waa maxay isbeddellada soo baxaya ee laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan hay'adaha SEO?
Markaad eegto xaaladda macaamiisha maanta, taas oo caddayn karta heerka aqoonta gaarka ah ee kooxdaada SEO, waxaa muhiim ah inaad qaado tallaabadan xigta - fiiri xaaladda ganacsiyada iyo sida isbeddelada macaamiishu u soo saaraan isbeddello cusub oo saameeya dhammaan silsiladda.
Si aad u dooratid kuwa ugu habboon ee hay'adda SEO, waxaan shaqaaleysiin doonaa muraayad kale: Gartner's Hype Cycle. Marka la soo koobo, qaabka uu soo jeediyay Gartner wuxuu awood kuu siinayaa inaad si dhab ah u qiimeyso ballanqaadka tignoolajiyada soo ifbaxa iyada oo loo marayo wejiyadan:
kicinta hal-abuurka: in kasta oo aanay jirin hawl-gal ganacsi oo weli, waxaa jira xiiso badan oo ku aaddan awoodda tignoolajiyada cusub. Tusaale ahaan AI u soo qaado, qof kastaa wuu ka hadlayaa.
Waxa ugu sarreeya filashooyinka sicir-bararka: Shacbiyad badan iyo sheekooyin yar oo guul ah, laakiin u badan halgan iyo guuldarro. Ballanqaadka AI inuu beddelo adduunka sida aan u naqaanno, sax?
Meesha Niyad-jabka: Dulsaarka ayaa hoos u dhaca, maalgashadayaashuna hoos u dhacaan, maadaama tignoolajiyada ay ku guuldareysatay inay bixiso ballanqaadkii hore. Kaliya dhowr horumariye ayaa ku adkeysanaya.
Jilicda Iftiinka: Badeecadaha jiilka labaad iyo saddexaad waxay u muuqdaan marka tignoolajiyadu ay bilowdo inay dejiso oo ay muujiso kiisaska kale ee isticmaalka ee caddaynaya inay suurtagal tahay. Barashada mishiinada iyo barashada qoto dheer waxay leeyihiin qaybo la isticmaali karo oo xoog badan, kana fog xaaladihii hore ee scifi.
Plateau ee Wax soo saarka: Tignoolajiyada ayaa lagu dabaqaa dhammaan qaybaha iyo suuqyada, iyo shuruudaha qiimaynta ee suurtagalnimada ayaa hadda sii cad. Heerarka korsashada mishiinada ayaa si joogto ah u koraya.
Waa maxay isbeddellada soo baxaya ee saameyn kara muuqaalka wakaalada hadda, oo ka baxsan niyad jab?
Ka shaqaynta fog sida hab-samaynta shirkad shaqayn karta
Xitaa ka hor inta uusan faafin masiibada, kor u kaca shaqada fog ayaa la arki jiray. Haddii isbeddelku u ekaado mid u dhexeeya tijaabinta iyo qaab-dhismeed wax soo saar leh, iyada oo la dardargelintiisa ay sabab u tahay COVID-19, shaqada fog waxay noqonaysaa qayb weyn oo ka mid ah kuwa caadiga ah ee cusub.
Dhowaan, waxaan aragnay caqabadaha juqraafiyeed oo u guuray kuwa waqtigoodu yahay, gaar ahaan shirkadaha isku midka ah ee wada shaqeeya inta badan shaqada. Caqabadda ayaa weli ah in la cusbooneysiiyo labadaba heerka tignoolajiyada iyo hababka ganacsiga si loo beddelo socodka shaqada, iyadoo sidoo kale la ilaalinayo dhaqan urureed oo xooggan. Intaa waxaa dheer, taasi waxay ka dhigan tahay hab ka duwan samaynta qoritaanka, taageeridda kobaca shaqada, ama awood u siinta xidhiidhada bulshada ee kooxda. Taasi waa waxa Remote: xafiiska looma baahna sahaminta, isagoo soo bandhigaya sida Basecamp u naqshadeeyay shirkad fog-koowaad leh dhammaan faa'iidooyinka iyo halganka.
Way caddahay in isbeddelku uu halkan joogo si uu u sii ahaado, dib-u-qaabaynta waxyaabaha ay ka midka yihiin isgaadhsiinta, xidhiidhada macmiilka ama wax soo saarka shakhsi ahaaneed iyo kooxda.
No-code ayaa buuxinaya godadka "Software as a process"
Shirkadaha Software-ka, iyagoo isku dayaya inay helaan isticmaaleyaal badan, waxay bilaabeen inay horumariyaan xalal shakhsiyeed oo heer sare ah, oo saameeya geeddi-socod ganacsi bilow ilaa dhammaad. Taasi waa sababta, waxaan aragnaa isbeddel ku saabsan fekerka software-ma aha oo kaliya qalab, laakiin ficillo taxane ah oo tilmaamaya qaab ganacsi oo gaar ah iyo qayb gaar ah oo suuqa ah. Tusaale ahaan, aaladaha sida Zapier ama Integromat waxay u oggolaanayaan habeyn heer sare ah oo socodka ganacsiga, halka Jupiter uu yahay CRM u heellan warshadaha quruxda.
Haddii aan tixgelinno baahida ganacsi ee hirgelinta degdegga ah iyo habaynta sare, hal isbeddel gaar ah ayaa soo baxay. No-code, Dhaqdhaqaaq ay dadka aan lahayn khibrad barnaamijeed ay dhistaan ​​shabakado iyo qulqulo, sida isku xirka laba nidaam, isticmaalka jiidashada iyo hoos u dhigista, ayaa sii koraya maalmihii hore ee filashooyinka sicir bararka.
Beddelka socodka horumarinta software-ka soo jireenka ah ee "qeexadaha ganacsiga" una beddelo "fulinta software", no-code asal ahaan waxay ka dhigan tahay waqti iyo lacag yar oo lagu kharash gareeyo codaynta, iyo khayraad badan oo loogu talagalay hagaajinta hababka ganacsiga (suuqgeynta, iibinta iwm) iyo daahfurka.
Ka fakar inaad caawiso, aynu nidhaahno, alaab-qeybiye AC ah ayaa dejiyay nidaamka maaraynta macaamilka ee shakhsi ahaaneed oo leh xal otomaatig ah oo loogu talagalay hogaaminta u qalmidda iyo jadwalka booqashooyinka, iyada oo aan faragelin bini'aadminimo tallaabo kasta. Ama ka dhis sifo gaar ah korka Hubspot, si aad u qanciso socodka gaarka ah ee wakaaladaada. Iyo iyada oo aan diiradda la saarin ilaha farsamada, laakiin naqshadeynta habka.
Meheradaha (SMBs iyo Fortune 500) waxay diyaar u yihiin inay tijaabiyaan inbadan oo deegaanka dhijitaalka ah
Kahadalka wax ku saabsan daahfurka iyo tijaabinta, masiibada ayaa ku qasabtay ganacsiyada yaryar iyo shirkadaha waaweyn ee shirkadaha inay raadiyaan beddelaad kale, maadaama dhijitaalku uu noqday kanaalka aasaasiga ah ee dhammaan funnelka. Haddii dib-u-dhac suuqgeyneed ama iib-geyneed la heli karo, bilaha masiibada ahi waxay ahaayeen waqtigii dib loo eegi lahaa.
La yaab maaha in raadinta "Shopify" ay qaraxday ilaa Abriil-Maajo, iyada oo ganacsiyo badan loo baahan yahay in lagu iibiyo onlayn:
Qaababka ugu horreeya ee dhijitaalka ah ayaa la dardargeliyay, ama sida warbixinta McKinsey ay dhigayso, "waxaan ku horumarinay shan sano oo hore macaamiisha iyo korsashada dhijitaalka ah ee ganacsiga arrin ku dhow siddeed toddobaad". Tani waxay abuurtaa daaqad fursad hal abuurnimo iyo hal-abuurnimo, iyadoo hawlo ganacsi oo aad u badan ay u guurayaan agagaaraha dhijitaalka ah: laga bilaabo hagaajinta kaabayaasha dhijitaalka ah ilaa kobcinta maaraynta macaamiisha iyo isgaarsiinta, dib u habeynta safarrada macaamiisha, iyo xitaa aqoonsiga qaybo cusub, goobo ama suuqyo aan hadda jirin. meel ka baxsan.
Taasi waxay sidoo kale ka dhigan tahay tiro badan oo ah baahida xogta iyo dariiqa wakaaladaha SEO si ay uga faa'iidaystaan ​​​​sida ay u yaqaaniin.
Raadinta oo kala daadsanaanta
Dalka Maraykanka, in ka badan kala badh macaamiishu waxay ka bilaabaan safarkooda wax iibsiga ee Amazon, beddelka Google Search, tirakoobyo laga yaabo inaad taqaanid. Google sidoo kale way ka warqabtaa isbeddelkan, taas oo ka dhigaysa inay sii wadaan horumarinta isku-darka toosan sida Shaqooyinka ama Wararka. Taasina waa qayb ka mid ah isla'egta raadinta ee ka baxsan "sanduuqa iyo 10ka isku xidhka buluuga ah", iyagoo hadda aad ugu tiirsan dabeecadaha wax kasta oo kale.
Iyada oo si degdeg ah loo digitiyay ganacsiyada COVID ka dib, isbeddelka raadinta iyo kala qaybsanaanta daahfurka ayaa ku sii kordhaya heer sare, caqabad ku ah ganacsiyada si ay uga jawaabaan isbeddellada kanaalka iyaga oo aad uga fikiraya meelaha taabashada ah iyo raadinta iibsadaha marka loo eego safar aan toos ahayn, oo keli ah. Tani ma noqon kartaa dhalashada kicin cusub oo cusub?
Isku xirka ganacsigu ma aha sidii hore
Faafida ayaa si weyn u saamaysay isku xidhka ganacsiga, maadaama aanay dhacdooyinka suurtogal ahayn shakhsi ahaan, isbeddelkaas oo u badanaya inuu sii jiro muddo ka dheer intii la filayay. Mowjadda ugu horraysa ee jawaabaha waxay ahayd in loo guuro dhacdooyinka khadka tooska ah, shir-madaxeedka casriga ah iyo noocyo kala duwan oo webinars ah, laakiin sidoo kale waxaa jirta su'aasha ah wadahadallada aan rasmiga ahayn iyo shirarka iibka ee u baahan in dib loo fakaro si loo ilaaliyo tayada isdhexgalka.
Sida shaqada fog, xuduudaha juqraafi ahaan kama walaacsana helitaanka iibiyeyaasha ama isku xidhka asxaabta, taas oo ka tagaysa meel badan oo loogu talagalay hal-abuurka qaabaynta hababka isku-xidhka cusub. Sidee buu garoonku u ekaan doonaa bilo kale gudahood? Mise shirka iibka? Mise shirka beesha wakaalada? Malaha kicin kale oo hal-abuurnimo ayaa halkan ku qaabaynaya.
Laga soo bilaabo qiimeynta muhiimka ah ee isbeddellada macaamiisha ee ka dhanka ah xogta raadinta, ilaa habka isbeddellada ganacsigu ay u dardargeliyeen xaaladda hadda jirta, waxaan bilaabaynaa inaan sawirno sawirka muuqaalka cusub ee wakaaladda. Waa kuwee kuwan wanaaga u ah iyo kuwa kiciya wareegga Hype? Taasi waa su'aal u furan adiga iyo annaga labadaba.
Waa kuwan soo koobid wixii aan ilaa hadda aragnay ee dhanka Macaamiisha iyo Isbeddellada:
Sida macaamiishu hadda u muuqdaan:
Heerarka shaqo la'aanta iyo welwelka caafimaadka ayaa weli ah mid sarreeya, taasoo keenta walaac iyo samaynta dadka inay dib u qiimeeyaan waxa muhiimka ah iyo waxa aan muhiimka u ahayn nolol maalmeedka.
Isticmaalayaal badan ayaan "ku soo noqon doonin sidii caadiga ahayd" maadaama pragmatism ay weli tahay xoogga dhaqaajinaya iibsashada shay cusub. Hase yeeshee, qaar ka mid ah alaabooyinka ku-talo-galka ah ama aan muhiimka ahayn ayaa bilaabaya inay dib u soo noqdaan, maadaama heerarka taxaddarku ay ka leexanayaan.
Noocyada cusub ee macaamiisha ayaa soo baxaya, maadaama ay sidoo kale beddelaan kanaalada isticmaalka. Xirfad-yaqaannada ugu horreeya ee khadka tooska ah iyo kun-sanonada argagaxa leh waxay ka walaacsan yihiin caafimaadka iyo dhaqaalaha, halka ay jirto soo kabashada xishoodka ee isticmaalka "leben iyo hoobiye".
Madadaalada ayaa ku sii kordheysa aagagga guriga la xiriira ama bannaanka nabdoon.
Ka shaqaynta fog-fog waa hab-samaysan shirkad shaqayn karta oo caqabad ku ah hawlaha ganacsiga iyo dhaqamada ururka.
No-code ayaa buuxinaya daldaloolada "Software-ka habraac ahaan", taas oo u sahlaysa ganacsiyada in ay si degdeg ah u sahamiyaan xalalka tignoolajiyada, kharash yarna ay ku jiraan, iyaga oo wanaajinaya hanaankooda.
Meheradaha (SMBs iyo Fortune 500) waxay diyaar u yihiin inay tijaabiyaan wax badan oo ku saabsan deegaanka dhijitaalka ah, maadaama macaamiishu ay ku taliyaan iibka iyo suuqgeynta cusub.
Kala qaybsanaanta goobidda iyo daahfurka ayaa ku sii socota dardargelinta, taasoo caqabad ku ah ganacsiyada inay dib uga fikiraan safarrada iibsada.
Kasbashada ma aha dhacdo ku saabsan mar dambe waxayna noqon kartaa dhulka hal-abuurka weyn ee soo socda.
Waxaan sii wadi doonaa taxanahan, iyadoo ku saleysan cilmi baarista beeshayada wakaaladaha SEO iyadoo si qoto dheer loo falanqeynayo moodooyinka ganacsigooda hadda iyo waxa isbeddellada 2020 ay ku dhiirigelin karaan dib-u-qaabaynta wakaalada heerka xigta. Waxaad iska diiwaan gelin kartaa halkan oo aad noqon kartaa kuwa ugu horreeya ee hela maqaallada soo socda ee taxanaha, marka ay toos noqdaan.
Markaan nahay SEOmonitor, waxaa naga go'an inaan ka caawino wakaaladaha SEO inay maraan hubanti la'aanta, si aan xalkeena ula qabsano xaaladda hadda jirta. Isbeddellada Raadinta, Kormeeraha Caafimaadka Macmiilka ama guddiga warbixinta waa qayb ka mid ah agabkayaga iyo agabkayaga gaarka ah.
Tan si wadajir ah ayaan uga gudbi doonnaa!
Soo hel goob SEO ah oo loogu talagalay kaliya wakaaladaha SEO:
Wax ka baro xalalkayaga
Xayeysiiska Microsoft wuxuu balaadhiyaa Profile-ka LinkedIn, dib u suuqgeyn firfircoon, bartilmaameedka dhagaystayaasha suuqa dhexdiisa
A Corona Xmas: Waa maxay sababta dukaamada jirku ay awood u siinayaan wax iibsiga onlaynka ah xilligan fasaxa